XAAF oo magacaabay guddi doorasho oo cusub | Caasimada Online
Home Warar XAAF oo magacaabay guddi doorasho oo cusub
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xalay magacaabay guddi doorasho cusub, maalin kadib markii uu kasoo horjeestay dowladda federaalka.
Qoraal uu soo saaray Xaaf, ayuu ku magacaabay guddigan oo ka kooban 11-xubnood, waxaana uu ku armay inay soo xaroodaan ugu dambeyn 10-ka bishan Janaayo.
Xaaf ayaa sidoo kale guddiga faray in guddoomiye iyo ku xigeen doortaan ugu dambeyn 12-ka bisha Janaayo.
Magacaabistan ayaa timid maalin un kadib markii Xaaf uu sheegay in isagoo tix galinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dowlad goboleedka Galmudug, uu dib ula laabtay awoodii uu horay ugu wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya.
Guddiga maamul u dhisidda Galmudug ayaa shalay aqbalay 20-ka xildhibaan ee ay soo gudbisay Ahlu-Sunna, taasi oo u muuqata inay ugu dambeyn xalin doonto khilaafkii ka dhaxeeyey dowladda iyo Ahlu-Sunna, balse tallaabooyinka uu qaaday Xaaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda Galmudug,
Hoos ka aqriso warqadda uu xalay soo saaray Xaaf